Ny orinasa mpanamboatra fitaovana sy mpandraharaha Shina - Cixi Wenap International Trading Co., Ltd.
Home > Products > Hardware Tools > Mitantana ireo fitaovana
Ireto manaraka ireto ny momba ny Holding Tools mifandraika, manantena aho fa hanampy anao hahatakatra bebe kokoa amin'ny Tools.
Ny orinasa WENAP dia manampahaizana amin'ny fikarohana, famokarana ary fivarotana fitaovam-pandrafetana Standard sy tsy misy Standard. Fangatahana lava-pamonam-potoana, Fango misy lavalava lava be, izay ahafahana mamantatra kokoa ny pliers raha oharina amin'ny fingotra mahazatra. Fangatahana lava mangatsiaka no ampiasaina mba hikoriana. Ity fitaovana ity dia manana lava lava lava sy malefaka. Io dia ampiasaina mba hahatongavana any amin'ny toerana izay tsy ahafahan'ny mpizara tsy tapaka.